ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကက နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဆောင်သော ၆ ဦးအဖွဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပွဲပြုလုပ်ရန်နှင့် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြန်လည် သုံးသပ်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ သဝဏ်လွှာ ပေးပို့ | Pyithu Hluttaw
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကက နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဆောင်သော ၆ ဦးအဖွဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပွဲပြုလုပ်ရန်နှင့် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြန်လည် သုံးသပ်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ သဝဏ်လွှာ ပေးပို့
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက က နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဆောင်သော ၆ ဦးအဖွဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ပွဲပြုလုပ်ရန်နှင့် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြန်လည် သုံးသပ်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အများပြည်သူများ သိရှိနိုင်ရန် (၂၂. ၁. ၂၀၁၅)ရက်စွဲပါ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် (၁/၂၀၁၅)နှင့် (၂/၂၀၁၅)တို့ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
သဝဏ်လွှာ အပြည့်အစုံကို အောက်ပါ Link တွင် http://www.pyithuhluttaw.gov. mm/ download/ file/fid/4115 Download ရယူနိုင်ပါသည်။